Balekela kwindawo epholileyo kwi-Luxe Woodland Retreat - I-Airbnb
Balekela kwindawo epholileyo kwi-Luxe Woodland Retreat
Trastanello (Frazione Di Armo), IMPERIA, Italy
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguJackie
Balekela emahlathini kule ndawo yokuphola ngaselunxwemeni lweentaba zaseLigurian. Indlu esandul ‘ukuvuselelwa ngo-2021, le ndlu yasemaphandleni ithe tyaba' rustico 'ihleli phezu kweentlambo ezincinci eziluhlaza kunye nesiphelo esikhulu selali encinci yakudala. Umzantsi Afrika ujongene nendlu enamatye amaninzi abucala ukuze wonwabele ukubuka nokutshona kwelanga ngaphandle kokuphazamiseka. Yiyure eyi-1/2 kuphela ukusuka elunxwemeni, le ndlu isemaphandleni inezinto zale mihla nezakudala. Ukufikelela lula kwi-Riviera emangalisayo yase-Itali, kunye nokubuka iindawo zasekuhlaleni kunye nezinto onokuzonwabela ezikufutshane.
Indlu yamatye efudumeleyo nethandanayo kwiintaba zaselunxwemeni lweLigurian kunye neendawo ezintle. Le ndawo yokuhlala ingqongwe yindalo, phakathi kwemithi yomnquma kunye nemidiliya kwaye yindawo epholileyo yokuphola, ejikelezwe ngamahlathi agcwele iintaka nezilwanyana zasendle. Indawo entle ye-yoga nokucamngca (kuquka iindawo zangasese), ukunyuka intaba, ukuhamba ngebhayisekile, kunye nokuqhuba ibhayisekile endleleni. Zininzi iindlela ezintle zasekuhlaleni ezingqonge indlu nezinye ezininzi xa uhamba ngemoto.
Le ndawo inekhitshi elinento yonke kunye nendawo yokutyela, iitawuli ezitofotofo, umatrasi osemgangathweni kunye nezinto zokondlula ibhedi, iigawuni zokunxiba, iimveliso zegumbi lokuhlambela, njl njl ukuze uzive uthe zava kwaye usekhaya.
Le ndlu incinci isandul 'ukulungiswa ine:
- Ikhitshi kunye negumbi lokuhlala elinesinki, imiphezulu ye-granite, izixhobo ezahlukahlukeneyo, iipani, isitovu segesi esiyi-5 sale mihla esineoveni, kunye nesitovu sokupheka esivuthayo kunye neoveni, itafile yokutyela nezitulo, iidrowa, ifriji, amanzi ashushu nabandayo aphumayo.
- Igumbi lokulala eline-Ikea bamboo ibhedi enkulu enkulu nomatrasi osemgangathweni ophezulu, iitafile ezisecaleni, iishelfu, iimpahla nesitulo esisofa.
- Igumbi lokuhlambela eline-shower, i-mandi-style bath, indlu yangasese nesinki
- Amatye amabini amakhulu angaphandle abucala
aneendawo zokujonga ezingaphazamisekiyo: Ithala lokutyela elinetafile ephandle nezitulo
: Indawo yelanga yabucala eneendawo zokutyela ilanga
- Ithala leteknoloji (i-wifi edityaniswe phantsi kwemithi enomthunzi)
Iindwendwe zinokonwabela IBHASIKITHI YOKWAMKELA iindwendwe simahla xa zifika ezinento yokwenza nemifuno, amakhambi neziqhamo (amaxesha athile onyaka), isonka sasekuhlaleni, ioyile yomnquma kunye ne-biscotti, ijam eyenziwe ekhaya, iti yesiNgesi kunye nekofu yaseItaly. Ibhasikithi yesidlo sakusasa ifakwe kwisicelo.
INKCAZELO EHLAZIYIWEYO NGOKHUSELEKO: Iindwendwe zethu zinokuqiniseka ukuba sizihoya kakhulu ukuze siqinisekise ukuba zonke iindawo ezibanjwa qho zibulawa iintsholongwane kuyo yonke indlu ngaphambi nasemva kokuhlala kondwendwe. Siqesha umntu ococayo oyingcali ibe sisebenzisa izinto zokucoca ezilwa neentsholongwane kunye nokucoca nge-steam kumgangatho, ekhitshini nakwigumbi lokuhlambela.
INDAWO YOKUKHEMPISHA: Ebudeni beenyanga zaseNtwasahlobo nasehlotyeni, iindwendwe zinokulungiselela UKUKHEMPISHA
okongezelelekileyo kummandla okufutshane, ukwenzela abantwana abadala namanye amalungu entsapho. Ezi ndwendwe zongezelelekileyo ziza kuba nezinto ezifanayo nendlu. Nceda uqhagamshelane nathi ukuze silungiselele le ndawo yokukhempisha eyongezelelekileyo, ngaphambi kokubhukisha. Kukho imali eyongezelelekileyo yeekharaveni ezongezelelekileyo.
Pitch kuphela € 10 ngosuku
Pitch + 2 umntu intente eneemethi nezinto zokondlula ibhedi € 20 ngosuku
Undwendwe luza kungena kwindawo
yabucala nelali, igadi kunye namadlelo akufutshane (iyafumaneka ukuze kubekho indawo yokukhempisha eyongezelelekileyo). Iindwendwe zingazinceda zifumane imifuno neziqhamo ezininzi xa zisebudeni bexesha lonyaka, zize zikwazi ukusebenzisa ioveni yeplanga ephandle, ezinefenitshala eyaneleyo yokutyela abantu nokuhlala kwidolophana ekutshoneni kwelanga.
I-Wifi iyafumaneka kwindawo ephezulu ngasendlini nakwigadi engasemva yondwendwe (Ithala leteknoloji, apho kukho itafile encinci nezitulo zokuhlala emthunzini ne-wifi etofotofo). Kukho isignali engaqhelekanga kwindawo yokutyela ye-rustico. NCEDA UCETYISWE UKUBA akukho WiFi ifumanekayo ngaphakathi kwi-rustico/indlu esemaphandleni.
Bhalisela ukufika ukususela ngo-15.00 ebusuku
Phuma ngo-10.30 kusasa
Ukubhalisa xa ufika nokuphuma okubhetyebhetye, kusekho iintsuku ongenakuzibhukisha KUPHELA ngexesha lonyaka elingaxakekanga. Ukususela ngoJuni ukuya ngoSeptemba xa ufika naxa uphuma ngokuqhelekileyo akunakwenzeka ngenxa yocwangciso lokucoca.
IYEZA KUNGEKUDALA ngo-2022 …. Intente eyakhiwe ngamaplanga entle enebhedi elala abantu ababini, ikhitshi elisemaphandleni kunye nomgangatho we-yoga
Le ndlu isecaleni, ijonge ilali encinci yakudala enabanye abahlali abambalwa kuphela - kodwa yimizuzu eyi-30 kuphela xa uhamba ngemoto ukusuka e-Riviera ephithizelayo neyase-Itali. Kukho amanxuwa amaninzi kunye nezinto ezintle ezifuna ukulungiswa kwilali, kunye neelali ezijikelezileyo, kwaye kukho ipuli entle esentabeni ekufutshane kakhulu - landela isandi esivela endlini. Kukho iindlela zokungena emahlathini ngqo ukusuka endlwini, kunye nomhlaba omkhulu osondeleyo kunye negadi yeziqhamo zokukhempisha nokutshona kwelanga. Kukho iindawo zokuqubha zasendle ezinamachaphaza kwiintlambo eziliqela ezikufutshane.
Street food snacker and snorkel-loving mum of twins. Asia-phile and lover of all things spicy :) We like to stay in where local people like to live, work and play. Or you’ll find us in our Ligurian sanctuary.
Sihlala kwindlu ekufutshane, kunye nezinja zethu ezimbini ezinobubele. Siyakuvuyela ukuphendula nayiphi na imibuzo onokuba nayo ukuba uyasidinga. Unokuza uze unkqonkqoze emnyango okanye usithumelele nje umyalezo nge-app ye-AirBnB. Ukungena kwindlu kukwindawo enezitshixo.
Sihlala kwindlu ekufutshane, kunye nezinja zethu ezimbini ezinobubele. Siyakuvuyela ukuphendula nayiphi na imibuzo onokuba nayo ukuba uyasidinga. Unokuza uze unkqonkqoze emnyango o…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Trastanello (Frazione Di Armo)